Sawirro: Wasaaradda Amniga Galmudug oo la wareegtay Hub iyo gaadiid dagaal | XOG-DOON NEWS - Breaking News From Somalia
Home Wararka Maanta Sawirro: Wasaaradda Amniga Galmudug oo la wareegtay Hub iyo gaadiid dagaal
Wasaaradda Amniga dowlad goboleedka Galmudug ayaa shalay la wareegtay hub, gaadiid dagaal iyo maleeshiyaad deegaanka Balanbale ee Gobolka Galgadud.
Dadka deegaanka Balanbale ayaa ku wareejiyay Wasaaradda Amniga Galmudug hubka iyo gaadiidka dagaal, kuwaasoo la xareeyay, qeybna ka noqon doonaan dhismaha Ciidanka daraawiishta Galmudug.
Madaweynaha Galmudug Axmed Qoorqoor, Madaxweyne kuxigeenka Cali Ciid, Wasiirka Amniga iyo mas’uuliyiin kale ayaa ka qeyb galay munaasabada ay dadka reer Balanbale ugu wareejinayeen hubka iyo gaadiidka.
Wasaaradda Amniga Galmudug ayaa muddooyinkii u dambeeyay waday qorshayaal ay hubka ugala wareegeysay maleeshiyaadka, si loo qarameeyo, loogana dhigo ciidanka daraawiishta Galmudug, waxaana horay ula soo wareegtay hubka, gaadiid iyo maleeshiyaad ku sugnaa deegaano ka tirsan Mudug iyo Galgaduud.
Dhinaca kale Madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaahiye Qoorqoor ayaa maanta la filayaa inuu gaaro degmada Guriceel, halkaasoo lagu soo gabagabeyn doono socdaalkiisa Nabadda ee todobaadyadii u dambeeyay ku tagay deegaano ka tirsan Gobolada Mudug iyo Galgaduud.
Previous articleAmnesty International: Somali authorities must immediately release journalist Mohamed Abdiwahab Nur (Abuja)
Next articleSheekh Cali Wajiis oo ka mid ah Hey’adda Culimada Soomaaliyeed, si weyn u taageersan dowladda Farmaajo ayaa ka digay khatarta ka dhalan karta in dalku uu firaaq galo marka uu dhamaado muddo xileedka dowladda hada jirta, haddii aan laga heshiin doorashada. Hadal uu salaaddii cishaha ka jeediyay Masaajid ku yaalla mid ka mid ah Hotelada ku yaala Muqdisho ayaa tusaale u soo qaatay markii nabi Muxamed NNKH markii uu geeriyooday inta aan la aasin ay ka dhalatay dood ku saabsan cida xukunka qabaneysa, si loo helo cida hoggaanka talada sii wada. Waxaa uu sheegay in si taas la mid ah Soomaaliya uu ka jiro is qabqabsi ku saabsan dhanka xukunka dalka oo aan weli doorasho lagu heshiin, isla markaana haddii muddo xileedka dowladda hada dhiman dhamaado uu dalka halis galayo, haddaan lagu heshiin nooc doorasho. “khatarta la wajahaayo waxa waaye haddii dowladda hada jirta aysan xilligii loogu tala galay oo sharciyadeydii afarta sano aheyd aysan doorasho ku qaban, ragga mucaaradka iyo siyaasiyiinta aysan soo tanaasulin oo aysan ogolaanin muddo intee la eg hala ekaato inta Xaliima Yarey sheegtay ha noqoto ama ka yar ama ka badan muddo loogu tala galay in doorasho ay dhacdo noocee doonto ha ahaatee aysan ku heshiin madaxda qaranka, maamul goboleedyada iyo siyaasiyiinta, dalku markaas firaaq ayuu galayaa waana khatar, taasaa marka u baahan in qeybaha bulshada culimada, ganacstada inay ka shaqeeyaan in la isu soo jiido siyaasiyiinta, mucaaradka iyo dowladda hada talada heysa intaba si dalka khatar u gelin”ayuu yiri Sheekh Cali Wajiis. Dowladda uu hoggaamiyo Madaxweyne Farmaajo ayaa ku adkeysaneysa in doorashada dalka ka dhaceyso ay tahay mid awoodda shacabka dib ugu celinayaan oo qof iyo cod ah, balse aan weli muuqan jawigii lagu suurta gelin lahaa, waxaana arrintaas ka soo horjeeda siyaasiyiinta iyo maamul goboleedyada oo diidan qaabka ay dowladda u rabto doorasho qof iyo cod ah oo aanay waqtiga la heysto lagu qaban karin, ayna dowladda u hanqal taageyso muddo kororsi.